म्यासेन्जरमा आएको होन्डाको लिङ्क झुक्किएर पनि नखोल्नुहोस्, के हो त्यो म्यासेज ? - Rising Dainik
July 22, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on म्यासेन्जरमा आएको होन्डाको लिङ्क झुक्किएर पनि नखोल्नुहोस्, के हो त्यो म्यासेज ?
यसलाई झुक्किएर पनि नखोल्नुहोला । यो झुक्याएर व्यक्तिसँग सूचना संकलन गर्न जारी गरिएको ‘स्पाम’ म्यासेज हो। लिंकमा स्कुटर डेलिभर गरिने प्रलोभन देखाएर यो म्यासेजहरु दूरगामी प्रयोजनका लागि पठाइएका हुन्छन्। होन्डाको ७० औं वार्षिकोत्सवको शुभकामनासहितको म्यासेज भनिएको छ। तर २०१८ सेप्टेम्बर २४ मै होन्डा स्थापनाको ७० वर्ष पूरा भैसकेको छ। कतिपयले यो म्यासेजमा भएको फाराम भरेको समेत बताएका छन् । ति ब्यक्तिहरुको सामाजिक सञ्जालमा रहेको ब्यक्तिगत सूचना लिन स्पाम म्यासेज पठाइएको हो ।
बजेट वक्तव्यमा नै उल्लेख गरेअनुसार प्राधिकरणले अवै’ध फोन नियन्त्रण गर्ने ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) जडान गरेको हो । लामो समयको तयारीपश्चात् उक्त प्रणाली जडान गरिएको हो । प्राधिकरणले मोबाइल सेटको आयात पूर्व अनिवार्यरुपमा प्राधिकरणबाट स्तर स्वीकृति गर्न तथा आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै मोबालल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू भएको जनाएको छ ।
सुतिरहेका पितालाई ३ छोरीहरुले कु’टीकुटी मा’रे, दिदीबहिनीका कुराले सबैका आँखा रसाए
December 8, 2020 Ramash Kunwar